Izimpawu wezempilo nobuhle, ungathola eziningi. Kodwa ngelinye lamavesi abaluleke kunawo wonke - kungcono izinwele siqu. amanga amahle aluhlaza, izinwele ecwebezelayo bathini mayelana Ngiwumqemane womnikazi yabo. Nobuhle linendima ebalulekile. Wonke umuntu ufuna ukuba awugqinsi, kahle ahlelwe, izinwele aluhlaza. Kodwa kuthiwani uma imvelo ayizange pha ngcebo, noma-ke lulahlekile kakade? Indlela ugcwalise mncane futhi ziyaqothuka izinwele ukuphila okunempilo? Indlela ukuvuselela umbala wabo futhi lukhanye na? Ngemibuzo enjalo ke ibhekene inombolo enkulu kakhulu abesifazane namadoda.
Izimbangela Isimo esibi izinwele
Ngoba impatho noma izinwele nokubuyiselwa kuyadingeka, okokuqala kunakho konke, ukuze kutholakale imbangela yesimo sabo esibi. Ukuncipha kwamanzi angaphansi izinwele kungenxa umonakalo yabo mechanical imisebe noma amakhemikhali kusukela ukungondleki kahle noma yokuphila, nezinye izizathu eziningi.
Futhi uma ungenawo ahlaziye le nkinga, musa imbangela yesimo somuntu abampofu izinwele, abazi okuphulukisa. Okokuqala, kudingeka sicabangele indlela odla ngayo. Ukungabi micronutrients ibhalansi, okuyinto kuvela ukudla, isamba enganele ngamavithamini A no-E njalo kungaholela izinwele mncane. Kufanele futhi ukuhlolisisa imikhuba yakho embi. Intuthu yogwayi, utshwala nezidakamizwa egazini sibizwa njalo kakhulu isimo sibe sibi isimo izinwele, kanye umzimba wonke.
Ngokuvamile, uyakwazi ukubona abantu amakhanda abo yatholakala ukushisa abandayo noma ohangulayo ezibabayo. Okweqile noma undercooling kuholela umonakalo ezishisayo kuya isakhiwo izinwele, ukulahlekelwa bukhanye. Kodwa sidinga kuphela ukugqoka isigqoko kubanda noma sauna.
Imbangela evamile kakhulu ukulimala isakhiwo izinwele iba umphumela zamakhemikhali. Bathi ubuhle kudinga ukuzidela. Kodwa izisulu wobuhle ngokwayo! Penda izinwele zakho, yebo, konke okusemandleni kodwa ugweme izinguquko ngokweqile njalo yesithombe ngokusebenzisa izinwele. Konke kuhamba kahle, ngokulinganisela. Chemical ukwelashwa izinwele futhi kungaba yingozi.
Futhi ekugcineni, umbono jikelele kanjani ukucindezeleka. umonakalo Its umzimba ethi okuningi. Hhayi okuhlukile futhi izinwele. Kunezizathu ejulile Ukuwohloka izinwele, kodwa kufanele afakwe futhi aphathwe ochwepheshe bezokwelapha.
A indlela yokwelashwa izinwele incike izimbangela zesifo. Kodwa ikhona imithetho jikelele, ezifana saturation umzimba ngamavithamini A no-E amaqembu ngokudla kanye buso. Nokho, le ndlela yokwelapha yenziwa kanyekanye nokusetshenziswa i imoto afanele ukugeza ikhanda. Kunconywe ngalezi zinhloso ukusebenzisa imoto "Els Fibrologiya" okuyinto libuyekeza ekhona sihloko.
Imikhiqizo okusha L'Oreal Paris
Izacile futhi izinwele kwaphela sihluke okuqukethwe evamile engezansi le micu yangaphakathi. Babukeka zomile, "oblipayut" nekhanda kubo ungenza nokupakisha. Kodwa isimo esinjalo akuyona umusho. Isayensi ayikwazi ukubuyisela impilo nobuhle izinwele.
Ukuba khona inani elikhulu kakhulu yezokwelapha futhi Shampoo sobala okwamanje. Kodwa ukunakekela okukhethekile phakathi kule sethi udonsa imoto "Els Fibrologiya" ukuthi okubuyayo. Yena kungokwalabo umugqa omusha amathuluzi nge filoksanom. Filoksana molecule engena phakathi izinwele, baqala ukwandisa, ngaleyo ndlela kwande ukushuba ngamunye izinwele. Phakathi ukusetshenziswa isikhathi eside ka-molecule anjalo buthelela ngaphakathi izinwele, okwandisa ukujiya yabo nevolumu. Ngaphezu kwalokho, izinwele ezinjalo kulula ukuze uvumelane bese ugcine nokupakisha isikhathi eside.
Ukubhalisa nokusatshalaliswa komkhiqizo
Zonke amashampu uchungechunge "Els Fibrologiya" eyakhishwa ngo-amathangi oluluhlaza. Umbala ngokwawo engasindi futhi nakubheka kahle iso. Iziqukathi imoto abe ivolumu 250 ml, kulungile ukuthatha esandleni. Ngokuqina ngesankahlu ikhava ayikuvumeli ukulahlekelwa yingxenye ibhodlela imoto ekwindla. Shampoo has a nephunga amakha 'emtoti', okuyinto Sekuyisikhathi eside igcinwe kwi izinwele, ayinayo nokucija ngakhoke akusho ziphazamise ezinye iphunga uzizwe. Angenisa ukukhanya, alube nombala omhlophe imoto okufana buso ubuso. Elseve (imoto) ine degree isilinganiso izindleko ngesilinganiso. Lapho isicelo ukumanzisa izinwele, ubizwa iguqulwe kalula ibe lather futhi basakaza kahle izinwele.
"U-Elsa" - Shampoo - akhiwa Ochwepheshe best of the inkampani yezimonyo in France L'Oreal. It inezigaba asebenzayo ezifana acid acidosis, utshwala filoksan. Sulfate, okunikeza foamy ezinhle, musa ngalesi siyingi kubangele ubuhlungu. Acidosis acid is kuhlangene utshwala ngesikhathi esifanayo ukuhlanzwa ithambisa, kuvimbela overdrying futhi ukuluma kwesikhumba.
Lokhu imoto yakhelwe abanikazi emihle, elithambile izinwele nokuhlukanisa inkokhelo kuphelile. isenzo sayo siqondiswe i nokunwebeka, eziqinile futhi obukhulu izinwele Imicu yotshani kusuka ngaphakathi. Lwenza nemibandela nokuvusa izinwele kusukela isibani uqobo. Izinwele akusho kuphela ukuthola nobukhazikhazi, kodwa futhi isikhathi eside ukuthi lona uthunjwe, ngaleyo ndlela esindisa ukufakwa. Uma kukhona isidingo ukuwasha nsuku zonke, ubukhazikhazi izinwele ukumelana ithemba. Ngokuhamba kwesikhathi, izinwele akubi "ezisinda" kangaka, ukugcina isimo sabo futhi ivolumu. ukusetshenziswa isikhathi eside lokhu imoto kungabi nesidingo njalo ukugeza ikhanda njengoba uboya obude silondoloze ukuhlanzeka. Ngokuphathelene ithuluzi ezifana imoto , "Els Fibrologiya" Izibuyekezo kukhona amakhasimende omuhle. Bathi ngesidingo okuncane kuphela imoto ozofakwa izinwele ezimanzi kanye nokusatshalaliswa ezinhle ubude izinwele zakhe ivolumu ekhanda. Ngemuva kwemizuzu engu-ababili noma abathathu, ungakwazi ugeze off the imoto ngamanzi afudumele.
imikhiqizo Elseve ukuqinisa izinwele
Enye eseyintsha kusukela inkampani L'Oreal. Kodwa ngalesi sikhathi hhayi ukuqina izinwele futhi ubaqinise kanjani. It kuqinisa Shampoo "Els ngamandla arginine."
Ibhodlela ahlotshiswe a imibala omnyama violet, it has a ivolumu 250 ml. Iphunga ukhumbuza wonke umuntu imikhiqizo L'Oreal - elithambile, elimnandi. Umbala imoto - omhlophe, nengxenye-okusobala, ukhumbuza pearl kukhanya, ngisho shimmers ekukhanyeni. ukujiya okulingene, osekuyisikhathi eside entendeni. Yena ine Foam esihle noma - kokubili ngowokuqala futhi isicelo sesibili.
Arginine kufakwe le imoto - ke uhlobo oluthile amino acid. Kufanele ezivezwa nomzimba womuntu, kodwa ngokuhamba kwesikhathi iba ngaphansi emzimbeni, futhi lokhu kuthinta izinwele. Njengengxenye izimonyo, arginine ivikela izinwele emathonyeni amabi kwemvelo, anezakhi okuzivuselela futhi bazogcwalisa izinwele izakhamzimba.
"L'Oreal Els" (imoto) "Amandla Arginine" ngemva ukusetshenziswa unika imiphumela emihle: izinwele uhlanzekile, shiny, kahle ayesebenza. Awukwazi ngisho ukusebenzisa namafutha. Dry izinwele imoto ngemva kwalokhu kuba sengathi enempilo futhi emuhle. Uma sezinwele has a isakhiwo ukusetshenziswa entsha dandruff imoto ezimboziwe, aliveli ngemva kwalokho dandruff. Lokhu kufakazelwa abasebenzisi eziningi, njengoba kukhona Izibuyekezo elihambisana.
Izinwele emva ukusetshenziswa imoto silky futhi nokunwebeka. Ngemva imoto ukugeza Elseve "Amandla Arginine" livela ukuqina ezithile izinwele. Ngakho, kubalulekile ukuba banake abantu ezithambile namahlongandlebe izinwele isitayela. Ngemva imoto izinwele zakho seziqine khulu futhi kuyoba kuhle ukugcina kwekhanda. okubuyayo kusuka amakhasimende amaningi ngekunenta wakufaka phezulu amashampu kwenye yezindawo zokuqala.
Shampoo "Els Fibrologiya" Izibuyekezo
Abathengi Shampoo "Els Fibrologiya" Qaphela ukuthi ukusebenza kakhulu ngempumelelo. Izinwele ivolumu inyuka kakhulu. Lo mphumela uyayibona ngendlela efanayo nalabo izinwele mncane futhi inkinga ngempendulo enqwabelanisa, labo inkinga akuyona esijabulisayo. Shampoo kakhulu kwandisa umthamo iyiphi izinwele. Ngaphezu kwalokho, ukusebenza Fluffy ihlala cishe izinsuku ezimbili.
Baphawula esinye ngokunenzuzo imoto. Lokhu eside izinwele nokuhlanzeka. Lokhu kuyasiza kakhulu kunoma ubani akakwazi ugeze izinwele zakho nsuku zonke. Izinwele ukuqina nomphumela singabonakala azibonile ngemva kokugeza kuqala. emva yesihlanu egeza umphumela Cishe kuba esitebeleni ngenxa ekuqongeleleni main asebenzayo izidakamizwa filoksan. Ngaphezu kwalokho, imoto ukuze alondoloze zezinwele ungeze polymer ekhethekile, elithengiswa ngokulinganayo ngokusebenzisa izinwele, aqabulayo kuwo futhi kunikeza ukukhanya. Ezinye Izibuyekezo bathi lapho usebenzisa lolu imoto kunciphisa inani izinwele elahlekile kanye izinwele kuba soft futhi silky.
Abathengi Shampoo elichaza ngokuthi "emangalisayo" futhi phakathi zako uphawu ubuhle touch futhi izinwele abalalelayo, iphunga, kulula lather, frothy kanye nomnotho.
Uma emashalofini uvele imoto "U-Elsa", 2014 izibuyekezo ezivela kulabo belisebenzisa, wagcizelela ukuthi kuyinto imoto ukonga nge ezimnandi, nehlala njalo amakha iphunga, futhi kalula wageza off nge ukukhanya, kulandele ecwaninga izinwele. Ngokusho abesifazane, imoto kwenza izinwele nobukhazikhazi, ubuhle kanye kukhanye enempilo, has a ibhodlela ukhululekile futhi kahle ehlotshisiwe, okuyinto lingavuleka ivaliwe omunye ngomunwe. Ingabe eqinile kanye lather ezinhle on izinwele, iconsi imoto kwanele. Angaba namafutha ukuthenga uchungechunge efanayo.
Nazi Izibuyekezo ezimbalwa mayelana imoto. Abesifazane nezinwele mncane futhi hhayi obukhulu kakhulu, wathenga "Loreal Els" (imoto), yanikeza incazelo komkhiqizo yezimonyo emva kwenyanga yokusetshenziswa: emaphaketheni elula, ebumnyameni, kodwa kancane esobala, kubonakala kalula ukuthi lezo zinsalela imoto ebhange. liquid AMAZING nge iphunga elimnandi futhi ingeyona engokwemvelo. Foams kahle, ahlanze izinwele, it is kalula wageza off futhi kuphazamisa izinwele. Imiphumela engemihle ngesimo ukulunywa, dandruff is hhayi waphawula. Nge isicelo nsuku zonke ngenyanga edlule esetshenziswa kuphela 4/5 of lonke jar. Njengazo zonke amashampu, iqukethe sulphates, kodwa ukuthethelela abanye. Seyomile izinwele kancane, kodwa kuhle kulabo inezinwele oily.
Kuyo yonke le minyaka futhi izikhathi abesifazane futhi amadoda wayegxila isimo izinwele zabo. izinwele Beautiful njalo edonsela iso. Kodwa ngeminyaka, inani into ezifana carotene, okunikeza impilo futhi kukhanye ukuze izinwele, kancane kancane kuyancipha. Izinwele baba ukhathele futhi ulahlekelwe ukukhanya kwazo. Le nqubo kungenziwa wayeka ngokusebenzisa ubuchwepheshe of L'ORÉAL laboratories. iminyaka eyishumi nesikhombisa kokusebenza kanzima imini yonke kwaba nemiphumela. Found filoksan isithako uyayixazulula inkinga izinwele elincanyana kusuka ngaphakathi. Ukusebenzisa redstva Elseve imoto "Fibrologiya" futhi Elseve "Amandla Arginine", wonke umuntu angakwazi ukubuyela ubuhle acwebile izinwele. Eyokuqala wabo uyobuyisela kuyaqina elahlekile kanye ukushuba we izinwele, kuzosiza ukufakwa. Owesibili uyogcwalisa oyifunayo izinwele trace izakhi kanye nokuvikelwa emathonyeni angaphandle. Ngokuhamba kwesikhathi, izinwele zakho ngeke Shampoo "U-Elsa" ukululama ephelele.
Shono simo amashampu e-UK, ngambuza ngale ukukhiqizwa phezulu ezinhlanu okungcono. On ukusebenza imoto Elseve "Fibrologiya" (izibuyekezo siliqinisekise) kusikhumbuza naseVichy imikhiqizo yenkampani. Loreal kodwa intengo ephansi kakhulu.